आँखामा पट्टि बाँधेर बसेका छौं कि कानमा तेल हालेर सुतेका छौं, भन्दै खनालले लामालाई झपारेपछि…. – PathivaraOnline
Home > समाचार > आँखामा पट्टि बाँधेर बसेका छौं कि कानमा तेल हालेर सुतेका छौं, भन्दै खनालले लामालाई झपारेपछि….
admin November 24, 2018 समाचार 0
काठमाडौ । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) सर्बेन्द्र खनालले आफु मातहतका निकायलाई कडा चेतवानी दिएका छन् । उनी महानगरीय प्रहरी अन्र्तगतका निकायप्रति आक्रमक बनेका हुन् ।
कञ्चनपूरको निर्मला पन्त हत्या काण्ड सेलाउन नपाउँदै शनिवार ९ प्रहरी अख्तियारको फन्दामा परेपछि महानगरीय प्रहरी प्रति आईजी आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका हुन । आईतवार दिउँसो नेपाल पुलीस क्लवमा महानगरीय प्रहरी अन्र्तगत सबै युनिटका ईन्चाजलाई बोलाएर आईजी खनालले सात्तो लिएका हुन । महानगरीय आयुक्त कार्यालयका प्रमुख डिआइजी मनोज नेउपाने देखी प्रहरी बिटका हबल्दार समेतलाई ब्रिफिनमा बोलाईको थियो ।
शनिवार साझ अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले कोटेश्वर र काँडाघारीका दुई प्रहरी साहक निरक्षकसहित सात प्रहरी जवानलाई घुस रकम सहित पक्राउ गरेको थियो । आफू मातहतलाई राम्रोसँग निगरानी नगरेको भन्दै आईजी खनालले काठमाडौं परिसरका एसएसपी बसन्त लामालाई झपारेका थिए ।
आँखामा पट्टि बाँधेर बसेका छौ की, कानमा तेल हालेर सुतेका छौं, भन्दै आईजी खनालले लामालाई झपारेको स्रोतले बतायो । उता शनिवार ९ प्रहरी पक्राउ सँगै आईजी खनालले कोटेश्वर काँडाघारीको प्रहरी प्रमुखको समेत हेरफर गरीसकेका छन् । आईतबार नेपाल पुलिस क्लवमा मातहतलाई निर्देशन दिदै आईजी खनालले कुनै पनि अनियमितता देखिए जिम्मेवारी त्यसको प्रमुख हुने भन्दै सचेत भएर काम गर्ने निर्देशन दिएका थिए ।
गलत आचरण भएकालाई संगठनमा ठाउँ नभएको भन्दै आईजी खनाले आचरणमा सुधार नआए बर्खास्तको लागि तयार रहन चेतावनी दिएका थिए । आईजीपी खनालप्रति गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलपनि शनिबार यसैगरी कड्कीएका थिए । संगठन बद्नाम हुँदै गएको भन्दै सच्याउन नेतृत्व नलिए हस्तक्षप हुनसक्ने बादलले संकेत गरेका थिए ।
नयाबाटो डट कम बाट साभार गरिएको
०७५ मङ्सिर ०९ गते आइतबार ई. सं. २०१८ नोभेम्बर २५ तारिखको राशिफल हेर्नुहोस
वाइस अफ नेपाल सिजन २ की मेचु धिमालको बुवाले गरे यस्तो भाबुक कुरा,आफु जहाँ रहेपनि छोरीको लागि आर्शिवाद ‘भिडियो सहित्
बतासे डाँडामा आगोको मुश्लोसँगै विमान दुर्घटनाको हल्लीखल्ली, वास्तविकता यस्तो!
भाईरल अघोरी बाबाले रेकर्डिंग स्टुडियोमै पेट मिचीमिची हँसाए, आफ्नै प्रेमिकालाई यसो भने(भिडियो)